G/Banadir kama shaqeeyo Amarka Wasaarada Amniga, waana u madax bannaan yahay xilligan Doorashada - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. G/Banadir kama shaqeeyo Amarka Wasaarada Amniga, waana u madax bannaan yahay xilligan Doorashada - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
G/Banadir kama shaqeeyo Amarka Wasaarada Amniga, waana u madax bannaan yahay xilligan Doorashada
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegay xilliga Doorashada uu Gobolka Banaadir u madax bannaan yahay Amniga, isla amrkaana aysan ka shaqeynin amarrada Amniga Xukuumadda Federaalka.
Guddoomiye ku-xigeenka Amniga G/Banaadir Cali Yare Cali, ahna taageere gaar ah oo saxiiib dhow la ah madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa sheegay in Gobolka Banaadir uu la siman yahay magaalooyinka kale ee dalka ee aanay ka shaqeynin amarrada Wasaaradda Amniga.
“Haddii waraaqada Wasaaradda Amniga aynan ka socon karin Bosaaso, Dhuusamareeb, Jowhar iyo Baydhabo ma jirto sabab culeys gaara loo saaro Gobolka Banaadir” ayuu yiri Cali Yare oo ku dooday inuu Gobolka u madax bannaan yahay amnigiisa iyo siyaasadiisa.
Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo Wasaaradda Amniga iyo maamulka Gobolka Banaadir ay isku khilaafeen bannaanbax lagu taageerayo Ra’iisal wasaaraha, loogana horjeedo madaxweynaha oo la qorsheeyay inuu ka dhaco magaalada Muqdisho.
Maamulka Gobolka Banaadir oo oo hoos taga Madaxtoyada Soomaaliya ayaa bannaanbax ku tilmaamay fowdo, amarna ku bixiyey in la joojiyo, halka ay fasaxday wsaaradda Amniga ay fasaxday, waxaana markii danbe soo dhex galay odayaasha dhaqanka oo xaaladda ku dhex jira.
Previous articleYaa ku guuleysan doona Xilka Guddoomiyaha Guddiga Doorashada FEIT..? (Farmaajo Vs Rooble)
Next articleGuddiga Doorashada Somaliland oo shaaciyey Liiska Odayaasha soo xulaya Ergada 6 Kursi